Posted by Tranquillus | Apr 19, 2018 | Kobcin xirfadeed
Dib u dhiska ama farshaxanka dib u riixaya berrito waxa aan samayn karno maanta.
Inkasta oo qaar ka mid ah ay ka dhigeen hab nololeed, kuwa kale ee ka soo horjeeda waxay sameeyaan wax kasta oo aan ku dhicin wareegga xun ee dib-u-dhaca.
Tani waa dhacdo caalami ah oo lagu turjumi karo iyadoo si iskaa ah dib loogu dhigayo hawlaha qorshaysan ee muhiimka ah iyo tan iyada oo laga yaabo inkasta oo ay keeni karto natiijooyinka keeni kara.
Dabcan, dib u habeynta jadwalkaaga si aad u oggolaato meelo dheeraad ah oo ah hawl muhiim ah maaha in la soo celiyo.
Xakameyntu waxay caadi ahaan dhacdaa marka hawlaha loo arko mid aan fiicnayn, halkaasoo abaalmarintu mararka qaarkood aanay jirin ama aan la fahmi karin.
Farsamadani waxaa lagu caddeeyey sayniska waxayna u keentaa khilaaf dhab ah oo u dhexeeya waxa uu qofkaasi sameynayo iyo waxa ay dhab ahaantii qabanayaan.
Ha u maleynina in dib-u-dhiska uu saameyn ku yeelan karo dad yar.
Mid ka mid ah daraasadda ayaa muujisay in ku dhawaad ​​20% dadweynaha ay ku dhaqmi doonaan dib-u-dhaca joogtada ah.
Ardaydu waa kooxda ugu guulaha badan sababtoo ah waxay udhexeeyaan 80 iyo 90% si ay ugu soo celiyaan ugu yaraan saacad maalintii.
Dib u dhiska, cawaaqibka:
Cawaaqibka dib-u-dhiska waa tiro badan oo aan ku koobneyn xaqiiqda ah in hawlaha dib loo dhigo.
Xaqiiqdii, dib-u-dhiciddu waa fashilmid la'aanta is-xukunka, tani maaha mid aan ku habboonayn, sababtoo ah waxay toos u keentaa hoos u dhigidda guud ahaan wanaagga.
Qofka soo kiciya, heerarka walaaca, walaaca iyo niyad-jabka ayaa sarreeya.
Xaaladda degdegga ah ee joogtada ah, xaalad jireed iyo maskaxeed ayaa aad u xun.
READ Talooyinka 7 ee Qiimaynta Xirfadaha Guud
Sidee loola dagaalamayaa dib-u-dhaca?
Waqtiga iyo fikraddiisu waxay door ka ciyaareysaa dib-u-dhiska. Waa maxay dhibaatadu waa inta badan qiyaasta qaldan ee waqtiga loo baahan yahay si loo dhammaystiro hawsha.
Mid ka mid ah wuxuu arki karaa xad-dhaaf ah ama rajiimka, laakiin labada xaaladood, qofka ayaa ku dhibtoonaya inuu wajaho xaqiiqda iyo daahitaankiisa.
Sidoo kale waa muhiim in la ogaado waxa degdeg ah iyo waxa aan ahayn. In si kale loo dhigo, waxaa quman in wax looga qabto hawl fudud sida hawsha ugu muhiimsan sida marmarsiiyo "waa lagama maarmaan in aan sidaas u sameeyo, waxa aan la sugi karin."
Ugu dambeyntii, waa wax aan faa'iido lahayn, xitaa wax khasaare ah, si aan naftayda u sheego habeenkii, waxaan joojin doonaa dib u dhiska.
Waxaa lagama maarmaan ah in la dhiso qorshe hawleed, falanqeyn ku sameeya dabeecadiisa gaarka ah iyo ujeedooyin macquul ah.
Nidaam sahlan waa in la dhiso guryahaaga iyadoo lagu saleynayo laba arrimood:
heerka deg degga ah iyo faa'iidada shaqada ee gacanta
heerka dhibaatada iyo dhibaatada.
Iyada oo loo tixgelinayo xaalad deg deg ah iyo faa'iido leh hawsha, waxay kordhineysaa dhiirigelintaada iyo kalsoonidaada.
Xulo tallaabooyinka aad adigu riixaysay muddo dheer iyo haddii ay jiraan wax ka badan hal, waxaad diirada saartaa kuwa ah in ay qaataan dadaalka iyo waqtiga ugu yar.
Dib u dhiska: cawaaqibta iyo talooyin si loo joojiyo wax walba dib u dhigis August 23rd, 2018Tranquillus
horeXasuusnow in aad ka qeyb qaadatid shirarka, talooyin si aad waxtar u noqoto
socdaSidee loo abuuraa daciifnimadaada xoog?